Gobalada – Page 2 – Goobjoog News
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey xarun ay wax ku bartaan ardayda aan wax maqal (Dhagoole), iyadoo ay ka faa’ideysanayaan dad u badan carruur. Iskuulkan waxaa in la furo...
Mas’uuliyiinta gobolka Gedo ayaa sheegay in guud ahaan ay xireen xadka u dhaxeeya magaalada Belad-xaawo iyo Mandheera, waxa ayna ku sababeeyeen in uu kordhay xad-gudubka ay geystaan ciidamada Kenya ee ku sugan xadka. Guddoomiyaha degamada...
Maamulka Hirshabeelle ayaa dib xorriyadooda u siiyey ganacsato shalay la xiray xilli ay ku wajahnaayeen deegaanka Gamboole ee Sh/dhexe, si ay halkaasi ugula soo kulmaan xubno kamid ah A-shabaab. Maamulka Sh/dhexe ayaa amray in lasoo...
Ciidamo ka wada tiran dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay maanta ku dagaallameen degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in ciidamadan dagaallamay ay ka kala tirsan yihiin Milatariga...
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ayaa waxay shegayaan in duleedka magaaladaasi uu ka dhacay shil gaari oo sababay dhaawac soo gaaray wasiir ka tirsan Puntland iyo dad kale. Gaariga shilka galay ayaa...
Maamulka Jubbaland ayaa amarro cusub kusoo rogay shirkadaha duulimaadka ee ka shaqeeya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Cabdullaahi Aadan Maxamuud oo ah maareeyaha guud ee Garoonka Kismaayo ayaa isaga oo la hadlaya warbaahinta waxa...
Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Xoogga Dalka ayaa dib isaga soo baxay deegaanka Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo ay shalay kala wareegeen Al-shabaab. Dadka ku sugan Gamboole qaarkood oo aan xiriir...
Shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa soo dhoweeyay biyo-keenista Wabiga Shabeelle oo maalmo badan biyo-la’aan ahaa. Qaar kamid ah shacabka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in uu biyo keeno Wabiga,...
Somaliland ayaa maanta qoraal uu soo saartay ka mamnuucday adeegsiga Domainka “.so” iyaga oo ku doodaya in uu raad ku yeelanayo qarannimada iyo Madaxbannaanida Somaliland. Hadaba, Qoraalkaas oo Dhameystiran Halkan Ka Akhriso.
Waxgaradka ku dhaqan Puntland ayaa sheegay in walaac ay ka qabaan maamulka dekadda Boosaaso ee shirkadda DP World. Nabadoon Cabdiraxmaan Jaabiri Samatar oo la hadlay Goobjoog News, ayaa sheegay in waxgaradka Puntland ay dalbanayaan in...